Tsvaga iwo mashanu akanakisa makambi muCatalonia | Kufamba Nhau
Susana Garcia | | Accommodation, España, General
Kunyangwe izvozvi isu tisingakwanise kuenda nerwendo, zvirokwazvo tichakurumidza kukwanisa, saka izano rakanaka kuenda kunotsvaga akasiyana mazano kuti uone nyika. Mune ino kesi tichaona ndiwo akanakisa makambi muCatalonia, nesarudzo yakapusa inogona kukubatsira iwe kuwana pekugara nemutengo wakanaka munharaunda ino.
Nhasi kune mamwe makambi anotipa mhando dzese dzenyaradzo, saka haisisiri pekugara iyo inomira kunze chete nemutengo wayo wakanaka, asi iri sarudzo yakanaka kana uchitsvaga pekugara. Tiri kuenda kunoona kuti ndeapi akanakisa makambi muCatalonia kana iri nzvimbo yako inotevera.
1 Musasa Rhodes
3 Kambi Nautic Almata Glamping
4 Musasa Prado Verde
5 La Siesta Salou Resort & Musasa
Iyi yakanaka musasa iri muPunta Falconera, mutaundi reRoses, kiromita imwe chete kubva kumahombekombe eSanta Margarida. Iwo anenge makiromita makumi manomwe kubva kuGirona airport. Mu Kunze kwemusasa kune nzvimbo yekutamba uye zvakare maviri makuru ekushambira ane nzvimbo yekushambidza kwezuva. Iyi inzvimbo yakanaka yemhuri uye ine nzvimbo yekudyira, kuitira kuti tirege kuenda kunotsvaga mamwe masevhisi. Izvo zvinokwanisika kugara mumabungalows akakwana ane chishongo chazvino umo mune zvese, kubva kunzvimbo yekutandarira kusvika kuzere kicheni, dzimba dzekurara dzinoverengeka uye dzimba dzekugezera. Iyo zvakare iri padyo nenzvimbo yemahombekombe kuti ugone kunakidzwa nenzvimbo ino kuitira kana iwe usiri kuda kuswera zuva iri mudziva. Kune avo vanozvisarudzira kunewo nzvimbo yematende pamusasa. Idzi dzimba dzechikamu chavo dzinokwanisa kusvika kuvanhu vatanhatu.
Isu tinoenda kubva kunzvimbo yegungwa kuenda kunzvimbo yemakomo, kubvira izvi musasa uri muLa Guingueta, muLleida Pyrenees anenge makiromita makumi matatu kubva paSort. Iyi kembi ine zvakanaka-yakagadzirirwa bungalows kune vanhu vatanhatu. Kuchenesa kwezvakatipoteredza kunopihwa, chimwe chinhu chinodikanwa mumwaka wechando, icho chinowanzo kuve mwaka mukuru munzvimbo ino. Iwo makamuri akagadzirwa neiyo rustic huni ine yakanaka gomo maitiro, izvo zvinoita kuti vawedzere kutonhodza. Uye zvakare, pamusasa pane dziva rekushambira rekunze rinopisa, nzvimbo yekudyira uye nzvimbo yekudyira. Munharaunda unogona kuita zviitiko zvakasiyana senge nzira dzemakomo dzemabhasikoro, kukwira makwikwi kana kutsvedza mumwaka.
Kambi Nautic Almata Glamping
Iyi musasa wakanaka uye wemazuva ano uri muCastelló d'Empúries padyo nerwizi uye nemamita mashoma kubva kumahombekombe eSant Pere Pescador. Idzo dzimba dzekugara dzinopenya-tende tende, yakakura kwazvo uye zvakare ine nzvimbo yeteneru ine maonero erwizi. Munzvimbo ino tinogona kurarama akakwana musasa chiitiko asi neakanyanya zvinobatsira uye nemhepo yakanaka. Mukati mekugara mune zvakare nzvimbo diki yekicheni yekugadzirira chikafu. Pfungwa ye glamping ndeyekutendeka kune yekambi masitayiti, nezvitoro uye neyakareruka mararamiro, asi zviine zviwanikwa zvakanaka zvinoita kuti kugara kwacho kuve nyore zvikuru kumhuri nemapoka eshamwari.
Musasa Prado Verde
Iyi musasa iri muVilamòs, munzvimbo ine makomo uko kune chando mumwaka wechando mwaka. Isu tinowana imwe musasa uko kune makuru makamuri makabati ekugara nemhuri. Iwo ma bungalows ane anosvika matatu emakamuri ekurara uye ane anokwanisa huwandu hwevanhu sere. Ivo vane chapakati kupisa, imba yekutandarira ine sofa, uye yakazara kicheni. Iko hakuna kushomeka kwezviwanikwa mune ino yakanaka musasa ine makomo nharaunda. Iyo musasa inopawo nzvimbo yekudyira uye nzvimbo yekudyira kwaunogona kuve nemidziyo inonaka uye kunyange chingwa chitsva. Kunze kune nzvimbo yekutamba hombe uyezve nenzvimbo huru yekubhachura kwaunogona kugadzira chikafu chekunze chemhuri yese. Munzvimbo dzakakomberedza unogona kuita zviitiko zvakasiyana zvekunze senge kukwikwidza kana kuchovha bhasikoro.
La Siesta Salou Resort & Musasa
Iyi yakaoma inzvimbo huru yakagadzirirwa mhuri yese iri pakati pemisasa yakanakisa muCatalonia. Iyo ine akasiyana maresitoreti ane akasiyana masimba, asi zvinokwanisika kugara mumakamuri. Iyo Bungalows akagadzwa-mushe, iine nzvimbo yekugara ine sofa, kicheni, imba yekugezera nenzvimbo yeterror, zvese zvakashongedzwa nenzira yechizvino uye yakapusa. Iyi nzvimbo yekutandarira inopawo yakawanda yevaraidzo kumhuri yese, sezvo iine mana madziva ekushambira, imwe yacho iine inoshamisa nzvimbo yekuzorora ine majeti emvura uye hydromassage. Mune imwe mune masiraidhi ekunakidzwa nediki remhuri. Iyo yakaoma zvakare ine mamwe masevhisi ne buffet-style yekudyira ine cuisine yepasirese, nzvimbo ye supermarket uye cafeteria. Iri muSalou, padyo nemahombekombe uye ine zvese izvi zvekuzorora kukuru nemhuri yese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » General » Iwo mashanu akanakisa emisasa muCatalonia